Rasmi: Filimka Mubarakan Iyo Todobaadkiisa Labaad Lacagaha Uu Keenay | Filimside –
Rasmi: Filimka Mubarakan Iyo Todobaadkiisa Labaad Lacagaha Uu Keenay
Anil Kapoor, Arjun Kapoor, Athiya Shetty iyo Ileana D’Cruiz filimkooda Mubarakan ayaa ayaa todobaadkiisa labaad keenay 12.50 Crore (Trade Figure) wuxuuna todobaadka labaad ka lacag badan yahay filimo badan oo ku jiro filimka weyn Tubelight oo lacagtaas keeni waayay todobaadkiisa labaad.
Laakiin Mubakaran mudo labo todobaad wuxuu keenay47.50 Crore (Trade Figure) mana ahan lacag bad baadin karto madaama todobaadkii kowaad wuxuu ganacsi liitay sameeyay.
Waa wax lacag fiican inuu 12.50 Crore keenay todobaadkiisa labaad filimkaan ayadoo masraxa loo baneeyay filimkii weynaa Jab Harry Met Sejal laakiin dhibka ugu weyn tahay lacagata lagu qarash gareeyay oo aad u badneyd 70 Crore masoo celin karo filimkaan.
Dhibka jiro wuxuu yahay todobaadka kowaad ayay saamiga ugu badan helaan kooxda cajaladaha qeybiyaan marka lacagta loo kala qeebsado 48% iyo 52% oo ay qaataan kooxda tiyaatarada iska leh laakiin todobaadka labaad saamiga wuxuu noqonaa 35% iyo 65% oo ay qaadanayaan kooxda tiyaatarada iska leh sidaa darteed hadii filimka todobaadka kowaad ganacsi adag keenin ma bad baadi karo.
Sida muuqato Mubarakan wuxuu ku istaagi doonaa cimri ahaantiisa 53 Crore ilaa 55 Crore lacago u dhaxeeyo wuxuuna ka lacag badin doona Arjun Kapoor filimkiisii Half Girlfriend oo isagana Boxoffice-ka ku guul dareestay bishii May ee sanadkaan.
Fadlan hoos kaga bogo todobaadka labaad filimada lacagaha ugu badan todobaadka labaad sanadkaan 2017 soo xareeyeen:
1. Bahubali: The Conclusion – 142.52 Crore (Qaytba Af Hindiga lagu daawaday oo kaliya)
2. Badrinath Ki Dulhania – 26.73 Crore
3. Jolly LLB 2 – 23.77 Crore
4. Hindi Medium – 18.23 Crore
5. Kaabil – 16.66 Crore
6. Raees – 15.90 Crore
7. Mubarakan – 12.50 Crore
8. Tubelight – 11.36 Crore
9. Jagga Jasoos – 8.26 Crore
10. Naam Shabana – 7.93 Crore
Waxaa Aqriyay: 756